Nahafinaritra Ny Media Sosialy Japoney Ny Nijery Ny Boky Fianarana Teny Anglisy Amin’ny Endrika Sarimiaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2016 7:21 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Italiano, Français, русский, Ελληνικά, English
Boky vaovao fianarana miresaka amin'ny teny Anglisy natao ho an'ny olon-dehibe mpianatra. Sary nozaraina fatratra ao amin'ny media sosialy.
Nahazo fanovana amin'ny endrika sarimiaina ny New Horizon, boky fianarana miresadresaka amin'ny teny Anglisy fampiasa any amin'ny sekoly Japoney, ambaratonga faharoa ary nalaza ny fanovana tao Japana tamin'ny diezy #エレン先生 (#EllenSensei).
Taorian'ny lanonana fidiran'ny sekoly ambaratonga faharoa androany, tonga tato an-trano niaraka tamin'ny boky vaovao fianarana anglisy ny zanako vavy. Mahafatifaty loatra i Ellen Sensei!
Misaraka tanteraka amin'ireo andian'ny New Horizon tsy mahazo aina sy tsotsotra ny endrika vaovao .
Endrika vaovaon'ny boky fianarana Anglisy New Horizon (ankavia) sy ny tonta (ankavanana) #EllenSensei
Nivadika ho fankafizana ny kanto mihitsy aza ny hatsaran-tarehy amin'ny endrika sarimiaina mahafafifaty misy an'i “Ellen Sensei”, mpampianatra Anglisy misahana ny fampianarana ny mpianatra amin'ny alalan'ireo boky telo, sahisahy mihitsy aza ny sasany ka niantso ny mpamorona ny mpilalao mba hifehy tena.
mbola mitranga ihany
Iray amin'ireo teny vahiny matanjaka indrindra ampianarina ao Japana ny teny anglisy, ary miezaka manatsara ny fahaizan'ny mpianatra amin'izany ny fitondram-panjakana. Mampisalasala ny vokatra hatramin'izao – misy ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahaizana teny Anglisy manerana ny faritra samihafa ao Japana.
Tsy izao no voalohany amin'ny fidiran'ny New Horizon amin'ny endrika sarimiaina. Manana boky fianarana natao ho an'ny olon-dehibe mpianatra mampivoitra ny fanembonan'izy ireo ny boky fianarana tany an-tsekoly ambaratonga faharoa ihany koa ny mpamoaka ny boky, saingy miaraka amin'ny endrika kanton'ny sarimiaina kosa.
Miresaka momba izany, fantatrao ve fa misy boky fianarana New Horizon natao ho an'ny olon-dehibe mpianatra izay mampiseho endrika olon-dehibe ireo mpandray anjara tena izy? Mifanaraka amin'ny zava-misy tanteraka ny lohahevitra sy ny toe-javatra!
Nivoaka tamin'ny 2011 ity boky fianarana ity ary mifantoka amin'ny lohahevitry ny olon-dehibe tahaka ny fihaonana mba hampianatra teny anglisy ilaina isan'andro isan'andro .
Raha mahafatifaty toa ity ireo mpilalao tamin'ny bokiko fianarana anglisy tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa, mety efa maila-mpiteny Anglisy aho.
Araka ny voalazan'ny teny fampidirana, manaraka ny anjorian'ireo mpandray anjara avy amin'ny boky fianaran'ny New Horizon any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ilay boky fianarana taorian'ny fiverenan'izy ireo tao Japana, rehefa avy nandany taona maro tany ampitan-dranomasina.
Mampiasa ny teknolojia “Augmented Reality (Zavamisy Nitarina)” (AR) ihany koa ny boky fianarana izay azo sokafana amin'ny finday matsilo, araka ny hita amin'ny lahatsary eto ambany:
Araka ny anamarihan'ny gazetiboky antserasera Japoney Spotlight ny momba ireo mpandray anjara ao anatin'ny boky fianarana sekoly ambaratonga faharoa:
Karazany misy endrika telozoron'ny fitiavana izay miteraka tantara an-tsehatra marobe ny tantaran'i Yumi, Lucy sy Ken. Azonao atao ny manaraka ny fiverimberenan'ny paikady rehefa mampihatra ny teny Anglisy, mahatonga ny boky ho fianarana mahafinaritra.